Ubukrelekrele bokwenziwa- ngaba sele bukhona? > UVielhuber uDavid
Ubukrelekrele bokwenziwa- ngaba sele bukhona?03
Nabani na ojonga ejikeleze ubuchwephesha kule minyaka mibini idlulileyo uya kufumana amagama afana nobuchwephesha bobuchwephesha okanye ubukrelekrele bokuzenzela (AI) amaxesha ngamaxesha. Kodwa xa sijonga kufutshane, siyabona ukuba uninzi lwezixhobo zisekude kubukrelekrele bokuzenzela. Iinkqubo zasekhaya ze-Smart ezinje ngezo zivela kwiAmazon okanye kuGoogle zihlala zihambelana ne-AI.
Kodwa apha, kwakhona, kubonakala ngathi akukho. Imisebenzi yomntu ngamnye yenziwa ngentetho. Oku kusekwe kwiinkqubo ezintsonkothileyo, nangona kunjalo, okwangoku zingenanto yakwenza nobu bukrelekrele bokuzenzela. Umbuzo uphakama wokuba ingaba sele bekhona ekusebenzeni ngasese kwaye ukuba kunjalo, ukuya kuthi ga phi.
KI - uphi ngoku
Okokuqala, kufuneka kuchazwe ngokucacileyo ukuba i-AI kwicandelo labucala kubonakala ngathi ayihoywanga kwaphela. Kwibala lomkhosi, izinto zahluke kakhulu. Sebenzisa ubukrelekrele bokuzenzela, zonke izifundo zoqeqesho ziyacetyiswa apho ukunqanda ukugqithisa kunye nokufuna kakhulu. Zonke izixhobo zezixhobo zixhotyiswe nge-AI, njengoko zinjalo nezinye iinkqubo zobuchule. Ukwahlulahlulwa kwamanani kunye nezithuba zomyalelo wedijithali kuyacwangciswa.
Into esele iqhelekile kwicandelo lezomkhosi ukuza kuthi ga ngoku ifunyenwe kumacandelwana ambalwa kwicandelo likarhulumente. Iirobhothi kunye nezithuthi ezizimeleyo kufuneka zichazwe apha. Ingxaki esisiseko nge-AI kukuba inkcazo enjalo ayikho. Kwiimeko ezininzi, oku kuya kuvumela abavelisi ukuba babhale nje iimveliso zabo zobugcisa ngobukrelekrele bokuzenzela. Ukuzenzekelayo kunokuba sele kubaliwe njenge-AI.
Izicelo ezinje ngoMguquli kaGoogle, osebenzisa iAI, bonisa ukuba kudala yafika kubomi bethu bemihla ngemihla. Nangona kunjalo, ukuza kuthi ga ngoku, isiphumo asikholisi ncam.
Ukuqhuba okuzimela kunokwenzeka kuphela nge-AI
Owona mzekelo ubalaseleyo kukuqhuba okuzimeleyo, obungenakwenzeka ngaphandle kwe-AI. Kufuneka kukhankanywe apha ukuba akukho nkcazo ichanekileyo kwaye itekhnoloji ye-AI ekuqhubeni isesekuqaleni. Kodwa ubukrelekrele bokufakelwa abufumaneki kuphela kulawulo oluzimeleyo, sele singalufumana kuluhlu olubanzi lwabancedisi. Nokuba kungumsebenzi wokuqhaqha okungxamisekileyo, ukupaka ngokuzenzekelayo okanye ulawulo lokuhamba ngenqanawa.
Ewe, ayibobukrelekrele obenziweyo esibaziyo kwiifilimu okanye ezincwadini. Uphuhliso alukafiki kwelo nqanaba.
I-AI kwintengiso ye-Intanethi
Iindlela zokuqala kurhwebo lwe-Intanethi zinokubonwa ngokucacileyo. Ukwenza nje ivenkile kunye nokwenza i-SEO akusasebenzi. Bonke ababoneleli abakhulu sele besebenzisa kakhulu i-AI. Kodwa loo nto ifuna nezixhobo ezininzi. Iindlela zokuqala zibandakanya incoko kunye neenkonzo zebot, umzekelo. Iziqalo zokuqala zinokubonwa ngokucacileyo kumava abathengi kwikhasino . Kwixa elizayo, nangona kunjalo, kuya kubakho iinkqubo zokufunda phantse kuwo onke amaxabiso exabiso. I-AI iya kuba nefuthe kwinkqubo yamaxabiso, ukuthengwa kunye nemveliso. Kwixesha elizayo elikufutshane, iirobhothi zingasicebisa kwishishini. Kunzima ukucinga. Kodwa kwiminyaka engama-30 eyadlulayo besingenakucinga i-Alexa nokuba.
Ayisiyiyo kuphela kwintengiso ye-Intanethi, kodwa nakwiivenkile ezimileyo, i-AI iya kuthi kwixa elizayo iqinisekise ukuba umsebenzi wesiqhelo unokwenziwa ngokuzenzekelayo kwaye ke nayo ifumane idatha kuphuhliso lwexesha elizayo. I-AI iya kubuchaphazela ubomi bethu kuzo zonke iindawo kwixesha elizayo.